Saafi Films - News: Al shabaab miino aasayey oo toogasho lagu dilay
Al shabaab miino aasayey oo toogasho lagu dilay
Ciidamada Dowlada Soomaaliya ayaa waxa ay maalmihii ugu danbeeyay kawadeen Howgal Degaano katirsan Gobolka Jubada Hoose kaas oo ay kubaacsanaayeen dad ay sheegeen in ay xiriir la leweyihiin Al-Shabaab.
Howgalkaan ayaa waxaa intiisa badan waxa uu ka dhacay Dagmada Badhaadhe ee Gobolka Jubada Hoose halkaas oo ay kasameeyeen Ciidamada Dowlada Soomaaliya waxaana lagu sooqab qabtay dad badan oo u badan dhalin yaro.
Gudoomiya Dagmada Badhaadhe ee Gobolka Jubada Hoose ee Dowlada Soomaaliya Farax Haybe Xaaji kaas oo lahadlay warbaahinta ayaa waxa uu kahadlay arimo badan oo ay kamid tahay Howgalkaasi.
waxa uu sheegauy in ay Howgalkaasi ay ku sooqab qabteen dadbadan kuwaas oo uu tilmaamay in ay haatan ku socdaa baaritaano xoogan waxaana uu intaa raaciyay hadalkiisa in ay Howgalkooda ay ku dileen ilaa dhalin yaro gaareysa 2 kuwaas oo uu sheegay in ay ahaayeen Al-Shabaab islamarkaana waqtig ay dilayeen ay dhigaayeen walxa qarxa sidaasi darteeda ay rasaas oo da u qaadeen taas oo ugu danbeentii sababtay in ay u dhintaan.
waxaana uu ugu danbeentii sheegay in ay siiwadayaan Howgalada nuucaan oo kale kaas oo uu sheegay Gudoomiyaha in ay kubeegsanayaan dad uu sheegay in ay xiriir laleeyiihin Al-Shabaab.
inta badan Ciidamada Dowlada Soomaaliya waxa ay sameeyeen Howgalo kaas oo ay ku beegsadaan dad ay sheegaan in ay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab.
4,553,865 unique visits